'डिजिटल नेपाल' मा लाइसेन्स- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
'डिजिटल नेपाल' मा लाइसेन्स
प्रधानमन्त्री केपी ओली अचेल भन्ने गर्छन्– नेपाल अब डिजिटल नेपाल हो, हरेक काम छिटोछरितो र पेपरलेस हुन्छ तर व्यवहारमा लागू रहेनछ भन्ने यथार्थ यो पंक्तिकारले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाँदा अनुभूति गर्न पायो  ।
प्रदेश २ मा जन्मेहुर्केको म हाल प्रदेश ३ मा स्थायी रूपमा बसाइँसराइ गरिआएको छु । मैले २० वर्षअघि आफू जन्मेहुर्केको सहर वीरगन्जबाट लाइसेन्स लिएको थिएँ, जसको पाँचवर्षे म्याद सकिएकाले म नवीकरणका लागि म घरपायक काठमाडौंको सुकेधारास्थित यातायात कार्यालयमा बसाइँसराइको प्रमाणपत्र लिएर गएँ । त्यहाँ मलाई ‘यहाँ नयाँ लाइसेन्स दिनेबाहेक अन्य अधिकार नरहेकाले एकान्तकुना यातायात कार्यालय जान’ भनियो । एकान्तकुनामा ‘तपाईंको यहाँ हुँदैन, प्रदेश २ को वीरगन्ज वा प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा जानुपर्छ’ भन्दै पन्छाइयो । मैले आफू बसाइँसराइ गरेर आइसकेकाले यहीँबाट पो काम हुनुपर्ने हो भन्दा यातायातका कर्मचारीहरू ‘तपाईंले यो कुरा यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकहाँ पुर्‍याउनोस्, अनि कुनै बाटो खोजिएला कि’ भन्दै टकटकिए । यो मेरो मात्रै होइन, प्रदेश परिवर्तन गरेका लाखौं नेपालीको समस्या हो । बस्ने एउटा प्रदेश, काम गर्ने अर्को प्रदेश अनि लाइसेन्स नवीकरण गर्न जानुपर्ने अर्को प्रदेश ? यो कस्तो परिपाटी हो ? सुखी नेपाली बनाउने यस्तै कामले हो ? एकातिर सरकार डिजिटल नेपाल बनाएको कुरा गर्छ, अर्कातिर जाबो एउटा लाइसेन्स नवीकरण गर्न पनि २०० किलोमिटर टाढा जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिन्छ ! किन नेपालको कुनै पनि यातायात कार्यालयले नेपालको कुनै पनि ठाउँका जनताको लाइसेन्स बनाउने, नवीकरण गर्ने, राजस्व बुझने काम गर्न सक्दैन ? आम सरोकारका यस्ता प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन कुन ऐन–नियम बाधक बनेको छ, त्यसको पहिचान गरौं र सरकारी सेवा सहज बनाऔं । अनि पो जनकल्याणकारी सरकार !
– गोपाल देवकोटा, गौरीघाट काठमाडौं ७
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ११:४५
झगडा पर्‍यो भने मुखमा पानी राख्नु रे  । ’ पहिले नै नितिनले हजुरआमाको मुखबाट यो कथा सुनेको हो  ।
तर उसले आफ्ना बाबाआमाले मुखमा पानी राखेको कहिल्यै देखेको छैन । मुखमा पानी नराख्दै उहाँहरू दुवै जना प्रायः चुपचाप हुनुहुन्छ । त्यही भएर पानी नचाहिएको होला ।
बाबाआमा हाँसीखुसी गफ गर्नुहोस् । दुवै जना आफूसँगै खेल्नुहोस् । अनि सँगसँगै घुमाउन लैजानुहोस् । यस्तो इच्छा कति हुन्छ नितिनलाई । तर अहँ कहिले त्यस्तो भएन । घुमाउनको त कुरै छोडौं । उहाँहरू एकअर्का साग राम्ररी बोल्दा नि बोल्नुहुन्न ।
बाबा अफिसबाट आउनुहुन्छ । चुपचाप, निराश । आमाले खाजा बनाएर राख्देको चुपचाप खानुहुन्छ । दुवै जना एकअर्कासँग राम्ररी बोल्नुहुन्न । केही भन्नु छ भने नितिनकै सहारा लिनुहुन्छ । बाबा भन्नुहुन्छ, ‘बाबु त्यहाँ झोलामा फलफूल छ । आमालाई झिकेर राख्नू भन ।’ अनि आमा भन्नुहुन्छ, ‘नितिन टेबुलमा खाजा राख्देको छु, बाबालाई भन है ।’ जब कि दुवै जना सँगै कुराहरू सुनिरहनुभएको हुन्छ । नितिनलाई बाबाआमाको यस्तो चालाले साह्रै दिक्क लाग्यो । बाबाआमा दुवैबाट माया पाए पनि यो छुट्टाछुट्टै मायाबाट ऊ खुसी हुन सकेको छैन । ‘आमा भोलि त स्कुलमा प्यारेन्ट्स मिटिङ छ । हजुरहरू दुवैजना स्कुल जानुपर्छ है १’ नितिनले अनुरोध गर्‍यो । ‘खोई म त जाउँला बाबा के गर्नुहुन्छ ?’ आमाले भन्नुभयो । आमाको यस्तो कुराले नितिनलाई साह्रै खिन्न बनायो । ‘प्लिज आमा बाबालाई हजुरले भन्नुस् न ।’
नभन्दै भोलिपल्ट आमा एक्लै स्कुल पुग्नुभयो । ‘सधैं यस्तै त हो । नितिनलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो । उसले मनमनै सोच्यो– ‘सबै साथीहरू जहिल्यै बाबाआमा सँगै आउँछन् । आफ्नो भने कहिले बाबा मात्र, कहिले आमा मात्र ।’ स्कुलको त्यो कार्यक्रममा उसले डान्स गर्नुपर्ने थियो । के नाच्यो, कस्तो नाच्यो, ऊ आफैंलाई केही थाहा पाएन । पछिल्ला दिनमा स्कुलबाट दिनदिनैजस्तो फोन आउन थाल्यो– ‘नितिन टोलाएर बस्छ ...। पढाइमा पनि पहिलेजस्तो ध्यान दिँदैन...। होमवर्क पनि राम्रो सँग गरेको हुँदैन.. । केही सोध्यो वा सम्झायो भने रुन थाल्छ ...।’
घरमा उसले गर्ने व्यवहार पनि पहिलेजस्तो छैन । फरक व्यवहारले बुबाआमा दिक्क हुनुभयो । तर किन यस्तो भयो भन्नेचाहिँ उहाँहरूले कहिल्यै बुझ्न सक्नुभएन ।
एक दिन नितिनले सारै जिद्दी गर्‍यो– बाबा नआई खाना नखाने । बारम्बार यही कुरा गरेर चुपचाप बसिरह्यो । बाबा आउन जहिल्यै रातिको १०/११ बज्थ्यो । आमाले सम्झाउनुभयो, ‘बाबा आउन ढिला हुन्छ खाऊ ।’ तर उसले मान्दै मानेन । दस बजेतिर बाबा आउनुभयो । तीनै जनासँगै बसेर खाना खाए । नितिनलाई आज धेरै खुसी लाग्यो । आज बाबाआमाले पनि कुरा गर्दै खाना खानुभयो । केही दिनदेखिको अँध्यारो नितिनको अनुहार उज्यालो देखियो । राति बेडमा पल्टेपछि नितिनको दिमागमा एउटा जुक्ति फुर्‍यो– ‘बाबाआमाको मौन झगडाको ओखती हुन सक्छु म ।’ यो सम्झेर ऊ मुसुक्क हाँस्यो अनि घुप्लुक्क निदायो । ‘बाबा’ नितिन जुरुक्क उठेर कराउँदै बाबा भएको ठाउँमा पुग्यो । बाबा त्यति चाँडै अफिसका लागि तयार भइसक्नुभएको थियो । ‘बाबा खाना खाएर मात्र हजुर अफिस जानुस्, हस ? नत्र म खाना नि खान्नँ, स्कुल नि जान्नँ ।’ कहिल्यै केही नभन्ने छोराले आज अचानक यस्तो भनेपछि उहाँले टार्न सक्नुभएन ।
आज बाबासँगै बसेर होमवर्क गर्‍यो नितिनले । अब दिनदिनै नितिनले झगडाको ओखती दिन थाल्यो बाबाआमालाई । कहिले खाना नखाने, कहिले स्कुल नजाने त कहिले होमवर्क नगर्ने बाहना बनाएर । ओखतीले बिस्तारै काम गर्न थाल्यो । अचेल बाबा सधैँ खाना खाएर अफिस जानुहुन्छ । बेलुका पनि चाँडै फर्किनुहुन्छ । बिहान–बेलुका बाबासँग खेल्न पाएर मक्ख छ ऊ । आमाको अनुहारमा खुसी देखेको छ नितिनले । सायद आमाले पनि बाबाको टाइम चाहनुभएको थियो । यही कुरालाई लिएर आमा बाबासँग रिसाउनुहुन्थ्यो होला । नितिनलाई त्यस्तो लाग्यो । आमाको फूर्तिफार्ती देखेर बाबाको अनुहारमा छाएको खुसी अनुभव गरेको छ उसले ।
नितिन पनि अचेल समयमै स्कुल पुग्छ । स्कुलमा हुने हरेक कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ र होमवर्क पनि राम्ररी गर्छ । अचानक उसमा आएको परिवर्तन देखेर शिक्षक पनि खुसी हुनुहुन्छ । अब आउने लामो बिदामा नितिन बाबाआमासँगै पोखरा घुम्न जाने भएको छ । यो योजना बाबाले बनाउनुभएको हो किनभने अचेल बाबाआमा दुवै खुसी हुनुहुन्छ । नितिन पनि मक्ख छ ।
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७६ ११:४४